Izindawo ze-Casino zase-Bolivian Online - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
(455 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Ukugembula eBolivia
Ukugembula eBolivia akuthuthuki kangako, ngoba konke ukugembula bekungekho emthethweni iningi lekhulu leminyaka elidlule. Ngo-1930, ukugembula kwavinjelwa ezindaweni zezimayini zezwe, kwathi ngo-1938 bavalwa ngokuphelele. Kwahlala iminyaka engaphezu kwengu-60, kwakha indawo evundile yokuthuthukisa ukugembula okungekho emthethweni. Ukuvikela ukukhula kwayo, ngo-1996 uhulumeni kwakudingeka anikeze amalayisense esikhashana amakamelo angama-200 emishini yokudlala namakhasino. Ukugembula eBolivia I-LONABOL ibhekwe kusukela ngo-1996 (Ikhomishini kaZwelonke yelotho yezinhlangano ezisiza abantulayo nezempilo).
Ngo-2002, amakhasino abhaliswa futhi. Ku-2011, yadalwa ngumzimba kahulumeni ogunyazwe ukunikeza amalayisense (avumeleke iminyaka eyi-10) nokulawula ukugembula eBolivia. Njengamanje, izwe linezinkampani ezi-4 zokugembula ezisemthethweni kuphela: iLotex, iCorhat, iJet Games neStar Mirage. EBolivia, kubuye kubhejwe ngokungemthetho okwandile. Cishe zingama-200 amahholo okudlala kanye nemishini engaphezu kwengu-4,000 esebenza ngokungemthetho.
Ukugembula oku-intanethi eBolivia
Uhulumeni waseBolivia uye wephuza ukulungisa inkinga yokugembula online. Njengamanje, akukho mithetho nemithethonqubo, ebhekisa ekugembuleni kwi-Intanethi, futhi uhulumeni waseBolivia akakathathi zinyathelo ukuvimba umdlali ukuthi angene kumasayithi wabasebenza phesheya. Izindawo eziningi zakwamanye amazwe zokugembula ku-inthanethi zinikela ngezinsizakalo ngeSpanishi, kanti ezinye zisekela nemali yendawo.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zaseBolivia
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseBolivia
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBolivia, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela eBolivia.
Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali baseBolivia
Bona uhlu lwamasayithi e-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBolivia, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Jabulela ukuhlukahluka okuningi kwe-roulette, i-blackjack, i-hold'em, neminye imidlalo yamakhadi. Ngeminye imininingwane, funda izibuyekezo zethu zamasayithi we-poker aku-inthanethi amukela abadlali abavela eBolivia.
Amasayithi ezemidlalo yokubheja ezemidlalo, ethatha abadlali beBolivia
Bona uhlu lwamasayithi wokubheja aku-inthanethi kulo mdlalo, uthatha abadlali abavela eBolivia, futhi unikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Beka ukubheja kwakho, khetha okulungele kakhulu i-Events koeffitsinty yakho phakathi kweziphakamiso zabaningi ababhuki be-inthanethi abayi-Bolivia. Ngeminye imininingwane, bheka amasayithi wethu wokubuyekeza ukubheja kwezemidlalo online, uthatha abadlali abavela eBolivia.
Amasayithi e-bingo e-inthanethi abamukela abadlali baseBolivia
Bona uhlu lwamasayithi e-bingo aku-inthanethi, uthatha abadlali abavela eBolivia, futhi unikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ezibuyekezweni zethu zamasayithi e-bingo aku-inthanethi achaza ukukhushulwa, amabhonasi nezindlela zokufaka kumasayithi e-bingo aku-inthanethi atholakala kubadlali abavela eBolivia.
Izingosi zokugembula zamaselula ezamukela abadlali beBolivia
Bona uhlu lwamasayithi wemidlalo ephathekayo, uthatha abadlali abavela eBolivia, futhi unikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi amasayithi ethu wokubuyekeza ukugembula okuhamba phambili ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakalela abadlali abavela eBolivia.
0.1 Ukugembula oku-intanethi eBolivia
0.2 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zaseBolivia
2.1 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseBolivia
2.2 Amasayithi we-poker e-inthanethi abamukela abadlali baseBolivia
2.3 Amasayithi ezemidlalo yokubheja ezemidlalo, ethatha abadlali beBolivia
2.4 Amasayithi e-bingo e-inthanethi abamukela abadlali baseBolivia
2.5 Izingosi zokugembula zamaselula ezamukela abadlali beBolivia
amakhasino we-supernova akukho ibhonasi yediphozithi